ShweMinThar: September 2016
မေထုနဓမ္မဆိုတာက ယောက်ျားမိန်းမ ဆက်ဆံမှုလောက်ကိုသာ
ဆိုလိုတာ မဟုတ်သေးဘူး။ တခြားတခြား မေထုန်ငယ်
(၇)ပါးဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းပြီး မြတ်စွာဘုရားက ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။
တစ်ချိန်မှာ ဆိုကြစို့ ... ဇာနုသောဏိ ပုဏ္ဏားကြီးက မြတ်စွာဘုရား-
ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရား ... မြတ်စွာဘုရားသည်
ဗြဟ္မစာရီ = မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်နေတဲ့ သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့
၀န်ခံပါသလားဆိုပြီး ဒီမေးခွန်းကို မေးတယ်။ မေးလိုက်တဲ့ အချိန်အခါမှာ
" ဒကာတော်ပုဏ္ဏား... ငါဘုရားသည် မကျိုးမပေါက် မပြောက်မကျားတဲ့
ပြည့်စုံတဲ့ ထက်ဝန်းကျင် ဖြူစင်နေတဲ့ ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကို ကျင့်နေတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်။ မကျိုးမပေါက် မပြောက်မကျားအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
စင်စင်ကြယ်ကြယ်ဖြင့် ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကို ကျင့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်ပုဂ
္ဂိုလ်လဲလို့ မေးခဲ့လျှင် ငါဘုရားကိုသာ ရည်ညွှန်းပြီး ပြောဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ
" ဆိုပြီးတော့ အမိန့်ရှိတော်မူလိုက်တယ်။
ဒီခါမှာ ပုဏ္ဏားကြီးက နည်းနည်း မကျေနပ်ဘူး။ မကျေနပ်တဲ့အတွက်
" အရှင်ဘုရား ...မကျိုးဘူး, မပေါက်ဘူး, မပြောက်ဘူး, မကျားဘူး ဆိုတာက
ဘာကို ပြောဆိုလိုတာလဲ?" ဒီလို သူက ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးမြန်း
လျှောက်ထားတော်မူတယ်။ ဒီအပိုင်းကလေးကို ဘုန်းကြီး ပြောချင်ပါသေး
တယ်။ အဲဒီလို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ မေထုန်ငယ် (၇)ပါးကို မြတ်စွာဘုရားက
မေထုန်ငယ် (၇) ပါး အရေအတွက်-
ယောက်ျားမိန်းမ ဆက်ဆံတာတော့ မပြုလုပ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ သူတို့က
ဘာဖြစ်နေကြသလဲ? အခုခေတ် အဘိုးကြီးတွေ အဘွားကြီးတွေ ဆိုကြစို့။
ဒီက ဒကာကြီးတွေ ဒကာမကြီးတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဘုန်းကြီး
မနှစ်က အမေရိကLA ဆိုတဲ့ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ရောက်တော့ ဒကာမ
ကြီးတစ်ယောက်က လျှောက်တယ်၊ အရှင်ဘုရား... ဒီမှာ အဘိုးကြီးတွေ
အဘွားကြီးတွေကို သနားလို့ သူဌေးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ သူတို့အတွက်
အဲဒီအခန်းမှာနေတဲ့ အဘိုးကြီး တစ်ယောက်နဲ့ အဘွားကြီးတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ အဘွား
ကြီးမှာလည်း အဘိုးကြီးက သေသွားတယ်၊ အဘိုးကြီးမှာလည်း အဘွားကြီးက
သေသွားတယ်။ အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်ကြပြီတဲ့။ အဲဒါ ခု လက်ထပ်မယ်လို့
သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်တဲ့။ အဲဒါပဲ။ ဒီတော့ မေထုနဓမ္မ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယေ
ာက် ဆက်ဆံမှုတွင် မကပါဘူး။ ဘုရားရှင် ဆိုလိုတော်မူတာကမေထုန်ငယ် (၇)ပါး ဖြစ်ကြတယ်။
နံပါတ် (၁) မေထုန်ငယ်က ဘာလဲလို့မေးတော့၊ ဥစ္ဆာဒန = နံ့သာရည်ဖြင့်
လိမ်းပေးတယ်။ ပရိမဒ္ဒန = ဆီလေးနဲ့ လိမ်းပေးတယ် နှိပ်နယ်ပေးတယ်။
နှာပန = ရေချိုးပေးတယ်။ သမ္ဗာဟန = ပွတ်သပ်ပေးတယ်။ အဲဒါကို
သဘောကျတယ်။ ဒါလည်း မေထုန်တစ်ခုပဲ။ ဘုရားရှင်ဟာ ဒါမျိုး ဘယ်တော့မှ
မပြုလုပ်ဘူး။ ဒါက တစ်ခု။
နံပါတ် (၂)ကျတော့ သဉ္ဇဂ္ဃတိ သံကီဠတိ သံကေလာယတိ = တစ်ယေ
ာက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောလိုက်ဆိုလိုက် ရယ်လိုက်မောလိုက် နောက်လိုက်
ပြောင်လိုက် နေတယ်။ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်။
အဲဒါကို သဘောကျတယ်။ အဲဒါလည်း မေထုန်ငယ်တစ်ခုပဲ။
နောက် နံပါတ် (၃)ကတော့ စက္ခုနာ စက္ခုံ ဥပနိဇ္ဈာယတိ ပေက္ခတိ =
သူ့မျက်စိနဲ့ ကိုယ့်မျက်စိ တည့်တည့်လေး ကြည့်ပေးတယ်။ မကြည့်ရလျှင်
မမြင်ရလျှင် မနေနိုင်ဘူး။ ဘာမှတော့ မလုပ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယေ
ာက် ကြည့်နေရလျှင် ကျေနပ်နေတယ်။ ဒါလည်း မေထုန်ငယ်တစ်ခုပဲ။
နောက်တစ်ခု နံပါတ် (၄)က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ မမြင်ဘူး
ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အသံလေးကြားရလျှင် သဘောကျနေတယ်။ သူငိုတဲ့
အသံပဲဖြစ်စေ၊ သီချင်းဆိုတဲ့ အသံပဲဖြစ်စေ၊ ပြောဆိုနေတဲ့ အသံပဲဖြစ်စေ၊
ရယ်မောနေတဲ့ အသံပဲဖြစ်စေ ကြားနေရလို့ရှိလျှင် သဘောကျတယ်။ ယခုကာလ
ရေဒီယိုတို့ ဘာတို့ နားထောင်တဲ့အခါ ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒါလည်း
နောက်တစ်ခု နံပါတ် (၅)က ဘာလဲ၊ မြင်လည်း မမြင်ရဘူး။ ကြားလည်း
မကြားရဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ တစ်ချိန်တုန်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
ပြောဖူးတယ်, ဆိုဖူးတယ်, ပြောင်ဖူးတယ်, နောက်ဖူးတယ်။ အဲဒါကလေးတွေကို,
ပျော်ပါးခဲ့ဖူးတာကလေးတွေကို အမှတ်ရပြီးတော့ ပြန်ပြီး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့
သဘောကျနေကြတယ်။ ဒါလည်း မေထုန်ငယ်တစ်ခုပဲ။
နောက် နံပါတ် (၆)ကတော့ အဲဒါမျိုးတွေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့
ကိုယ့်မှာ ဘာမှတော့ မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အခါကျတော့ သူတစ်ပါးတွေ အိုးနဲ့အိမ်နဲ့
တိုက်နဲ့တာနဲ့ ကာမဂုဏ်တွေ ခံစားပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး နေတာကို သွားမြင်လိုက်တာကိုလည်း
သဘောကျတယ်။ သူတို့လို နေချင်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ
ပေါ်လာပြန်တယ်။ ဒါလည်း မေထုန်ငယ်တစ်ခုပဲ။
နောက် နံပါတ် (၇)ကတော့ အဲဒီလို ပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေလည်း
မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်နေသလဲ? နတ်ပြည်နတ်လောက တစ်ခုခုကို
ရည်မျှော်ပြီးတော့ သီလကျင့်စဉ် သမာဓိကျင့်စဉ် ပညာကျင့်စဉ်တွေကို
ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် ပွားများအားထုတ်နေပြန်တယ်။ ရရှိမည့် ကာမဂုဏ်တွေကို လှမ်းမျှော်ပြီး သဘောကျနေတယ်။ အဲဒါလည်း
ဒီမေထုန်ငယ် (၇)မျိုး တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ မွေ့လျော်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း
အိုနာသေရေး ဒုက္ခဘေးမှ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ ဘုရား
Posted by Alex Aung at 11:07 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး ဝေဖန်သံတွေ အတော်ညံခဲ့ပါတယ်။ နှိပ်စက်စော်ကားခံရတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ် ကျူးလွန်သူတွေကို ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်နိုင်ဖို့၊ စွပ်စွဲခံရသူတွေ တိမ်းရှောင်မသွားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့် ကော်မရှင်ဘက်ကို အာရုံမစိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်ဆိုလို့ ဘာတွေပြောမလဲ သွားလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကြည့်ရင် နှစ်ဖက်လုံး ဒေါသသင့်နေကြတာ တွေ့ပါတယ်။ အဓိက ဖြေကြားတဲ့ ဦးဇော်ဝင်းဘက်က ဒေါသမာန်တွေ သင့်နေသလို သတင်းထောက်တွေဘက်က ကလေးနှစ်ယောက်အတွက် သနားကရုဏာသက်နေလို့လား မသိဘူး၊ သတင်းထောက်တချို့ဟာ လည်း ဒေါသသင့်နေပါတယ်။ ဖြေကြားမေးမြန်းမှုတချို့က ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီး ဖြေဆိုမေးမြန်းတာထက် ဆန္ဒနဲ့ ဒေါသကို ဦးစားပေးနေတာ သတိပြုမိပါတယ်။
ကော်မရှင်က ဒီလို စုံစမ်းစစ်ဆေးတာ သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဖြေသွားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေရဲ့ အပိုဒ် (၃၄) မှာ “ကော်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်တန်းချက်ပါ အကြောင်းခြင်းရာသည် ညှိနှိုင်း၍ရနိုင်သော အလားအလာရှိသည်ဟု ယူဆပါက ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသောနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရမည်။” ဆိုထားပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာရော အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုပါကြီးတို့လို ကိစ္စတွေမှာရော ဒီအပိုဒ် (၃၄) အရ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကိစ္စမှာဆိုရင် မြို့နယ်ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားပြီးတာတောင်မှ ဘာမှ အရေးမယူလို့ ကော်မရှင်ကိုတိုင်တယ်။ ကော်မရှင်က ဒီကိစ္စကို ခေါ်ယူစုံစမ်းတယ်ဆိုတာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်က သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တာဝန်ရှိတဲ့ ရဲစခန်းမှူးထက်ကို လျင်လျင်မြန်မြန် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် အပိုဒ်တခုဖြစ်တဲ့ အပိုဒ် (၂၉) ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ကော်မရှင်ဥပဒေရဲ့ အပိုဒ် (၂၉) မှာ “ကော်မရှင်သည် သဘာဝတရားမျှတမှု သဘောတရားနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြင် တရားမကျင့်ထုံးများ၊ ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးနှင့် သက်သေခံအက်ဥပဒေတို့ပါ သက်ဆိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆီလျော်သလို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင် ကော်မရှင်က မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ တရားမကျင့်ထုံးတွေ၊ ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးတွေနဲ့ သက်သေခံအက်ဥပဒေတို့မှာပါတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ကျင့်သုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။
အခုကလေးနှစ်ယောက်ကိစ္စကို ကော်မရှင်က အချင်းချင်း ဖြေရှင်းကြပါစေဆိုပြီး ခွင့်ပေးခဲ့တာဟာ အပိုဒ် (၂၉) မှာ ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ကို အပြည့်အ၀ မထမ်းဆောင်တာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်ကြားလို့ရောက်လာတယ်၊ ကြားနာစစ်ဆေးတယ်၊ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းခိုင်းတယ်၊ သဘောတူရင် ကျေအေးခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ တရားမမှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တရားမမှုဆိုရင် လက်ခံနိုင်ပါသေးတယ်။
ခက်တာက အခုကိစ္စဟာ တရားမမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ရာဇ၀တ်မှုမှာမှ အထူးကြီးလေးတဲ့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မတွေကို ကျူးလွန်တဲ့အမှုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကလေးသူငယ်စာချုပ်ကို ချိုးဖောက်တာပါ။
နိုင်ငံတကာ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်တာပါ။
ကလေးတွေ ဖြစ်ပျက်ခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်စုံစမ်းစရာတောင်မလိုဘူး၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကို တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေက လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံခံခဲ့ရတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ သက်သေခံရှာစရာကို မလိုတော့တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ သက်သေတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလောက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကလေးအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခံရတယ်လို့ ခိုင်မာစွာ ယူဆနိုင်တဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ဘာကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးလမ်းနဲ့ တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားဖို့ လမ်းမညွှန်ခဲ့တာလဲ။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာ တိုင်ကြားပြီး စစ်ဆေးတဲ့အမှုကိစ္စတခုရဲ့ အတိမ်အနက်ကို ကြည့်ပြီး ငွေကြေးနဲ့ ကျေအေးသင့်တဲ့အမှုလား၊ ဥပဒေအရ မဖြစ်အနေ အရေးယူသင့်တဲ့အမှုလား ဆိုတာကို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားခံရတဲ့သူတွေ မသုံးသပ်နိုင်မှုကို ပြည်သူတွေ ခံစားနေကြရတာပါ။ ကော်မရှင်ရဲ့ ဥပဒေထဲမှာ ကော်မရှင်ဝင်တွေဟာ “ပြည်တွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများကို ဗဟုသုတ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံရှိရမည်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဗဟုသုတုတွေကို အသုံးမချဘဲ အချင်းချင်းပြေအေးရင် ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ အယူအဆက လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းကို အမှန်တကယ် နားမလည်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ မတရားမှုဖြစ်လာရင် လူ့အခွင့်အရေး သဘောတရားတွေနဲ့ မှန်ကန်စွာ ရှုမြင်ပြီး တရားဥပဒေအရ ခံစားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းက လုံလောက်သလိုလိုနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ “ထိရောက် ထိုက်တန်သော ခံစားခွင့်” ဖြစ်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ ဖြစ်သလိုလုပ်မယ့်အစား လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ဖို့ အကြံပြုနိုင်တာမျိုးတော့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုကို ဟန့်တားဖို့ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ လူသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဝင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်း ခံထားရတဲ့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ရော လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ လူသားတယောက်အနေနဲ့လည်း တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ကော်မရှင်ဥပဒေအရ ကော်မရှင်က ဦးဆောင်တရားမစွဲနိုင်သည့်တိုင်အောင် “ထိရောက် ထိုက်တန်တဲ့ ခံစားခွင့်” တွေကို ရရှိနိုင်အောင် အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မကြိုးပမ်းဘဲနဲ့ အနိမ့်ဆုံးဖြေရှင်းချက်နဲ့ ကျေအေးခဲ့တဲ့အပေါ် လက်ခံခဲ့တာဟာ ကော်မရှင်ဝင်တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုအပေါ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုစိတ်ကို ထောက်ပြလာကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းက ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ကော်မရှင်ဝင်တွေ အပေါ်မှာသာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာတို့လို တခြား ဌာနဆိုင်ရာက တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်မှာလည်း မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဒီလို ဆိုးဝါးတဲ့အမှုကို ဒီလောက်ငွေပမာဏနဲ့ ကျေအေးလိုက်တာကို မဖြစ်သင့်ဘူးလို့များ တွေးမိကြပါသလား။ တွေးမိရင်ရော ဘာကြောင့် ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်လာအောင် တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ကြတာလဲ။
မနေ့ ဦးဇော်ဝင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာ စွပ်စွဲခံရတဲ့သူတွေကလည်း လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတာ လူသားချင်းစာနာမှု လိုအပ်သော သူမျိုးအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူ အပြစ်လျော့အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းက လူသားချင်းစာနာမှု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအမှုမျိုးဟာ ကြီးလေးတဲ့အမှု ဖြစ်တဲ့အတွက် တရားစွဲဆိုရပါမယ်။ စွဲဆိုစစ်ဆေးချိန်မှာ တရားလိုရော တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့သူရော လူသားကဲ့သို့ ဆက်ဆံခံမယ်။ ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတွေ တန်းတူရရှိပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျူးလွန်တဲ့အမှုကနေ ထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ် လျော့သွားအောင် လုပ်ပေးတာ လူသားချင်းစာနာမှု မဟုတ်ပါဘူး။ တရားစီရင်မှုကို မှားယွင်းလွဲချော်အောင် ကြိုးပမ်းမှုသာ ဖြစ်ပါမယ်။
ကော်မရှင်ရဲ့ ဥပဒေတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ နည်းနေပါတယ်။ ပြန်ပြင်သင့်ပါတယ်။ ကော်မရှင်ဝင်တွေအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုသလို လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်လိုတဲ့ စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဘောင်တွေအောက်မှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကန့်ထားတာမဟုတ်ဘဲ နစ်နာသူတွေ အမှန်တကယ် ထိရောက်ထိုက်သင့်တဲ့ ကုစားမှုတွေဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်းများ ရှာဖွေ ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုသလို လွဲချော်သွားမှုများရှိရင် ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ၀န်ခံသင့်ပါတယ်။
ရင့်ကျက်ပြီး အတ္တ၊ ဒေါသကြီးသောသူများထက် စကားပြောဆိုမှုစွမ်းရည်ရှိသော သူမျိုးများနှင့်သာ မီဒီယာ၊ လူထုဆက်ဆံမှုများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
(စာမူရေးသားသူသည် ပြည်တွင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်ပြီး Equality Myanmar ၏ ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်သည်။)
Posted by Alex Aung at 10:31 AM No comments:
ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ ဒေါ်စုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
နျူကလီးယားကင်းမဲ့သော ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးကို မြန်မာနိုင်ငံ ထောက်ခံပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံက တင်သွင်းတဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး နှစ်ပတ်လည် ပြဌာန်းချက်ဟာ လက်ရှိနဲ့ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံမှု ရရှိရေးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဒေသအများအပြားမှာ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့တဲ့ ရပ်ဝန်းတွေ ထူထောင်ရေးကိစ္စဟာ ဒီရည်မှန်းချက်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှု ပိတ်ပင်ရေး CTBT စာချုပ် အတည်ပြုချက်ကို ကျမတို့နိုင်ငံက ဒီညနေမှာ တင်းသွင်းမယ်ဖြစ်ကြောင်း ၀မ်းမြောက်စွာ အထွေထွေညီလာခံကို အသိပေးလိုပါတယ်။
Credit: VOA Myanmar
Labels: News and Info, ဟောပြောချက်
၀တ္ထုများ ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဗဟုသုတ ရဖွယ် စာအုပ်ပေါင်းစုံ
You can download the folders here:
ကြိုက်ရာလင့်ခ်ကိုနှိပ် အနည်းဆုံး စာအုပ် (၁၀) အုပ်ပါတယ်။ Download လုပ်ပြီးဖတ်ကြပေရော့။ Pdf ဖန်တီးပေးသောသူများ၊ မူရင်းစာရေးဆရာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ✌ ♥ ✌
Posted by Alex Aung at 3:06 PM No comments:
ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ဆိုတာ ယနေ့ခေတ်မှာ ငါးပါးသီလကို မလုံခြုံပဲ အစဆုံးသိက္ခာပုဒ်ကို ချိုးဖျက်လိုက်၊ အလယ် က ဖောက် ဖျက် လိုက်၊ နောက်ဆုံးက တခုကို လွှတ်ထားလိုက် လုပ်နေကြတဲ့ လူသားများ အတွက် တော်သ လင်း လပြည့်ေ န့ ရော က်တိုင်း သတိရစရာ၊ အတုယူစရာ၊ လိုက်နာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့ နေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါ ရဟန်းတော် နှစ်ပါး ဟင်္သာတကောင်ကို အလောင်းအစားနဲ့ သတ်ဖို့ ကြိုးစား ကြရင်း ကောင်းကင်ပျံဝဲနေတဲ့ ဟင်္သာကို ကျောက်ခဲဖြင့် လှမ်းပြစ်လေရာ ကျောက်ခဲမှန်သော ဟင်္သာသည် အော်ဟစ်မြည် တမ်းရင်း မြေပြင်ကျပြီး သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
ဒီအကြောင်းကို မြတ်ဘုရား သိတော်မူတော့ ချစ်သားရဟန်း သင်ဟာ သာသနာတော်မှာ နေပြီး ရဟန်းဝတ်နေ ပါလျက် ပါဏာတိပါတအမှုကို လုပ်တာ လက်ဆော့ ခြေဆော့ရှိလှပါလား၊ ဟိုရှေးရှေးတုံးက ပညာရှိတွေ က သာသနာပကာလမှာ သတ်ဖို့ နေနေသာသာ သီလတရားတွေကို အသက်တမျှ တန်ဖိုး ထား စောင့်ရှောက် ခဲ့ကြတယ် ဆိုပြီး ကုရုဓမ္မ ဇာတ်တော် ကို ဟောေ တာ် မူခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အချိန် မှာတော့ ကုရုတိုင်း ဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီ New Delhi မြို့တော် ၀န်းကျင်လို့ မှတ်တမ်းများအရ သိရတယ်၊ ဒါဆိုရင်တော့ ကုရုတိုင်းသားတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားစောင့်ခဲ့ကြ တယ်၊လို့ ဆိုရမ လိုပါ၊ မြတ်ဘုရား မပွင့်ခင်ကလဲ သာသနာပကာလမှာ ငါးပါးသီလ မြဲခဲ့ကြသလို မြတ်ဘုရား လက်ထက်တော်မှာလဲ ကုရုတိုင်းသားတွေဟာ အဆင့်ြ မင့် လာပြီး သမထ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးမျိုးကို လက်ကိုင် ထား ကျင့်သုံးခဲ့ကြတာမို့ ဘုရားရှင် က ကုရုတိုင်းကို ကြွတော်မူပြီး ခက်ခဲ နက်နဲလှတဲ့ မဟာသတိပဋ္ဌာန သုတ်တော် ကို ဟောတော်မူခဲ့ဖူးတယ်၊
စာရေးသူတို့ ဘုံဘေ ( Mumbai ) မြို့ကတော့ သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီးရဲ့ ကိုးတိုင်းကိုးဋ္ဌာဋ္ဌ သာသနာပြု အစီအ စဉ် မှာ ရှေးယခင်က မဟာရဋ္ဌတိုင်း လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပြီး အရှင်မဟာ ဓမ္မရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော သံဃာ ငါးပါး ကြွရောက် လာကာ မဟာနာရဒဇာတ်တော်ကြီးကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး သာသနာမျိုးစေ့ ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်၊ ယနေ့ခေတ် မှာတော့ Maharashatra မဟာရရ်ှထရ ပြည်နယ်ပေါ့၊ ဘုံဘေမြို့ပုနေး Pune မြို့တို့ဟာပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပြီး သီပေါ မင်းနေထိုင်ခဲ့ရာ ရတနာဂီရိ Ratnagiri မြို့ကတော့ မဟာရရ်ှထရ ပြည်နယ်ရဲ့ အနောက်တောင်ပိုင်း အစွန်အဖျားမှာ တည်ရှိတယ် လို့ မြေပုံအနေအထားများအရ သိရပါတယ်။
ဂေါတမ ဘုရားအလောင်း ပါရမီတော်များကို ဖြည့်ကျင့်စဉ် နုစဉ်အခါတုံးက ကုရုတိုင်း ဣန္ဒပတ္တမြို့တော် မှာ မင်းကျင့် တရားဆယ်ပါးနှင့်အညီ မင်းပြုတော်မူတဲ့ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းစိုးစံချိန်မှာ ကုရုဓမ္မ ( ကုရုတိုင်းသားတွေ စောင့်ထိန်းကြ လို့ ကုရု ဓမ္မ ) တရားဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာရ တယ် လို့ ဆိုတယ်၊
ကုရုဓမ္မ ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့လူတိုင်းစောင့်ထိန်းနေကြတဲ့ ငါးပါးသီလကိုပဲ ကုရုဓမ္မ ( တနည်းအားဖြင့် အချိန် ကာလတွေ ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ) ဂရုဓမ္မ ( ဂရု - လူတိုင်း တလေးတစား စောင့်ထိန်းသင့်သော၊ ဓမ္မ - ငါးပါးသီလ တရားများ ) လို့ အဓိပ္ပါယ် ခေါ်ဆိုရပါမယ်။
အတိတ်တချိန်က ဘုရားလောင်း မင်းပြုနေချိန် မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်လေ တော့ တိုင်းပြည် မှာ စည်ပင် ၀ပြောပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေခဲ့တယ်၊ အဲဒါတင်မကပဲ ဘုရားအလောင်း ရှင်ဘုရင်ကြီး ဟာ မြို့ရဲ့ အရပ်လေးမျက်နှာ၊ မြို့လယ်ခေါင်နေရာ နဲ့ မိမိနန်းတော်တခါးဝ ဆိုတဲ့ နေရာ( ၆ ) ခုမှာအလှူဒါနကို စိတ်ကြိုက်လှူဒါန်းပေးကမ်းလေ့ရှိခဲ့တယ်၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးလဲ ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်း ကြတယ်၊ တတိုင်းပြည်လုံးထဲမှာမှ အောက်ပါ ( ၁၁ ) ယောက်ကတော့ သီလကို အသက်နှင့် လဲပြီးကို ထိန်း သိမ်းကြပါသတဲ့။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ …
၁။ ဘုရားလောင်း ဘုရင်၊
၅။ မင်းအတိုင်ပင်ခံ ပုရောဟိတ် ပုဏ္ဏားကြီး
၇။ ရှင်ဘုရင်၏ ရထားထိန်းတော်၊
၈။ တိုင်းပြည်၏ အကြီးဆုံး ကုန်သည်ကြီး၊
၉။ နန်းတော် တံခါးမှုး
၁၀။ တိုင်းပြည် ကျက်သရေဆောင် သူဋ္ဌေးကြီး
အထက်ပါလူတွေကတော့ သီလ၀န္တတွေလို့ ဆိုရမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ ဘုရားအလောင်း ကုရုမင်းကြီး ဟာ ပါဏာ တိပါတသိက္ခာပုဒ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး တနေ့မှာ ရေကန်ထဲကို ခဲလုံးတစ်လုံး ပစ်ချရင်း ငါးလေးတကောင် ကို ထိမှန်သွားတာ သေသလား ရှင်သလား မသိရဘူး၊ အဲဒီအကြောင်းကို တွေးပြီး သူ့သီလကို သံသယ ဖြစ်မိပါသတဲ့။
ပြည့်တန်ဆာမ၏ သီလကို စမ်းသပ်လိုတဲ့ သိကြားမင်းဟာ တနေ့မှာတော့ လုလင်တယောက်အသွင် ဖန်ဆင်းပြီး အသပြာ ငွေ တစ်ထောင်ထုပ်ကို ပေးကာ နတ်ပြည် ပြန်သွားခဲ့တယ်၊ စရံသတ်ထားတယ် ဆိုတဲ့သဘော ထင်ပါရဲ့၊ သိကြားလုလင် လာမယ့် ရက်ကို မျှော်ရင်းမျှော်ရင်းနဲ့ စောင့်ထိန်းနေခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူက လာခေါ်သည်ဖြစ်စေ မလိုက်ပါဘူး တဲ့၊ ၃ နှစ်တိတိ ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ အသပြာ ၁ထောင်လဲ ကုန်ပြီ၊ စားစရာလဲမရှိ ဆင်းရဲလာတဲ့အ ခါမှာ တရားသူကြီးဆီ သွားပြီး အကျိုး အကြောင်း ပြောပြတော့ ၃ နှစ်အတိုင်းအတာဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ၊ စောင့်မနေပါနဲ့တော့ လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်၊
ဒီတော့ နောက်လူ အသစ်ကို လက်ခံမယ် လို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သိကြားမင်းက ပေါ်လာပြီး သီလကို စမ်းသပ်လိုတာကြောင့် ဒီလို လုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း တတိုင်းပြည်လုံးကို တရားဟောပြီး ပြည့်တန်ဆာမ အိမ်ကိုလဲ ရွှေငွေ စတဲ့ ရတနာ ၇ ပါးနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီး နတ်ပြည်ပြန်သွားခဲ့တယ်၊ ဒီနေရာမှာ အဲဒီအမျိုးသမီးလေးက သူ့သီလကို သံသယဖြစ်မိ တာက စောစောက လူသစ်ကို လက်ခံမိတာ ကို စိတ်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့နဲ့ မပျော်ရွှင်ပါဘူး တဲ့။ ကုရုဓမ္မအကြောင်းကို ပြောရင်းနဲ့ လိုရင်း ကို မရောက်နိုင် ဖြစ်နေမိပါတယ်၊ ဖော်ပြချင်တာက သူတို့ရဲ့ငါးပါး သီလကို အလေးထားပုံတွေကို ရိပ်မိစေလိုတာကြောင့် တင်ပြ လိုက်တာပါ၊ ရှိစေတော့ …
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကုရုတိုင်းနဲ့ မနီးမဝေး က ကာလိင်္ဂတိုင်း ဒန္တပုရ မြို့မှာလည်းပဲ ကာလိင်္ဂရှင်ဘုရင်ကြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အချိန်၊ သူတို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ မိုးခေါင်တဲ့ ဘေး ဆိုးကြီး ကျနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေပြီ၊ မိုးခေါင်လေတော့ သီးနှံ တွေလဲ မဖြစ်ထွန်းပဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ အငတ်ဘေး ဆိုက်လာပြန်တယ်၊ အငတ်ဘေး ဆိုက်ရုံ မကပဲ လူတွေ မသန့်မရှင်းဖြစ်ပြီး အနာရောဂါတွေ ထူပြောလာပြီး ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါကပ်ဆိုးကြီး ရောက်လာပြန်ရော ..
ဒီတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ကာလိင်္ဂဘုရင်ကြီးဆီ အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး ..
ဒီလို တတိုင်းပြည်လုံး ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ အရှင်မင်းကြီး ဒါန သီလတွေ များများပြုပြီး (၇) ရက်တိတိ ဥပုသ်စောင့်ပါက မိုးရွာပါလိမ့်မယ် လို့ လျောက်ကြတယ်၊
အဲဒီလို စောင့်သော်လည်း မိုးမရွာလေတော့ နောက်တဖန် ကုရုတိုင်းမှာ အဉ္ဇန၀ဏ္ဏ မင်္ဂလာဆင်တော်ကြီး ရှိတယ်၊ သူတို့ ဆီကို ဆင်တော်အလှူခံပြီး သယ်လာခဲ့ရင် မိုးရွာနိုင်ပါတယ် လို့ ဆိုပြန်တယ်၊ ဒီလို လုပ်ပေမယ့် အဆင်မပြေပြန်ဘူး၊
ဇာတ်တော်ကို အကျဉ်းချုံးရလျင် နောက်ဆုံးမှာ ကုရုတိုင်းသားတွေ စောင့်ထိန်းကြတဲ့ ငါးပါးသီလကို ရွှေပေလွှာမှာ ကူးယူ စေကာ ကာလိင်္ဂတိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အားလုံး စောင့်ထိန်းကြမှ မိုးလေ၀သတွေ မှန်လာပြီး တတိုင်းပြည်လုံးသာယာဝပြောစည်ပင် လာခဲ့ တယ်၊ တတိုင်းပြည်လုံး အသက်ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇာတ်တော် နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်များ သုံးသပ်ချက်
ဤနေရာတွင် ယခုလို ဆုတ်ကပ်ကာလကြီးထဲမှာ မိုးလေ၀သ မမှန်တာ၊ ကောက်ပဲ သီးနှံများ မအောင်မြင်တာ၊ လေမုန် တိုင်း နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ဆူနာမီ စတဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေဟာ လူတွေ တရားပျက် အကျင့်သီလ ပျက်စီးနေတာနဲ့ လည်း သက်ဆိုင်နေတယ် လို့ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်၊ စာပေများမှာတော့ လူတွေ တရားပျက်လာပြီ ဆိုရင် ကောင်းကင်က ပုံမှန် သွားလာနေကြတဲ့ ဂြိုလ် နက္ခတ် ကြယ် တာရာ စတာတွေလဲ လမ်းကြောင်း မမှန်တော့ဘူး၊ သူတို့ လမ်းကြောင်း ပြောင်းသွာတော့ လေမတိုက်သင့်ပဲ တိုက်တယ်၊ မိုးမရွာသင့်ပဲ ရွာချပြီး ရေကြီးတဲ့ဒုက္ခ၊စတာတွေ ကြုံရတယ်၊ မိုးက ရွာသင့်တဲ့ အချိန်မှာ မရွာပြန်တော့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာမျိုး၊ အိုဇုန်းလွှာ ပါးလာတယ်၊ ပေါက်လာတယ် ဆိုတာမျိုး၊ နောက်ဆုံးမှာ သဘာဝမီး တောင်ကြီးတွေ မကြာခဏ ပေါက်ကွဲလာတာမျိုးတွေကို လူသားတွေမှာ နေရာတိုင်း ခံနေ ကြရတယ်။
ဘာသာရေး ရှုထောင့် တခုတည်းကနေ သုံးသပ်ရမည်ဆိုလျင် လူတွေ တရားပျက်၊ အကျင့်သီလပျက်စီးကာ အကုသိုလ် တွေ များများ လုပ်လေလေ၊ အဲဒီဒေသ နေရာ တိုင်းပြည်တွေမှာ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကို မကြာခဏ ခံရလေလေလို့ ဆိုရ မလို ဖြစ်ေ န တယ်၊ အခုလဲ ကာလိင်္ဂတိုင်းသားတွေ သီလမြဲကာတရားစောင့်ကြတော့ ချက်ချင်းမိုးလေ၀သ မှန်လာတာ ဟာ သက်ရှိလူသားများနဲ့ သက်မဲ့ကမ္ဘာကြီးတို့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ၊ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓစာပေများကို ထောက် ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ သုံးသပ်ကြည့် မိတာ သက်သက်ပါ၊ အခြား မမြင်နိုင်သော သဘာဝ ရေမြေအနေအထား စတဲ့ အချက် တွေလဲ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ( ဥပမာ- ဂျပန်နိုင်ငံတခုလုံး သဘာဝငလျင်ကြောပေါ်မှာ တည်ရှိနေတယ် ဆိုတာက တော့ ယနေ့ခေတ် ပစ္စုပ္ပန်အနေအထားတွေလဲ အများကြီး သက်ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ် )
ဇာတ်တော် ပေါင်းခန်းမှာတော့ …
ဂါထာ ။ ။ ဂဏိကာ ဥပ္ပလ၀ဏ္ဏာ၊ ပုဏ္ဏော ဒေါဝါရိကော တဒါ၊
ရဇ္ဇုဂါဟော ကစ္စာယနော၊ မောဂ္ဂလာနော ဒေါဏမာပကော၊
သာရိပုတ္တော တဒါ သေဋ္ဌိ၊ အနုရုဒ္ဓေါ စ သာရထိ၊
ဗြဟ္မဏော ကဿပေါ ထေရော၊ ဥပရာဇာ နန္ဒပဏ္ဍိတော၊
မဟေသီ ရာဟုလမာတာ၊ မာယာဒေ၀ီ ဇနေတ္တိယာ၊
ကုရုရာဇာ ဗောဓိသတ္တော၊ ဧ၀ံ ဓာရေထ ဇာတကံ။
အထက်ပါ ကုရုဓမ္မ ဇာတ်တော်၌ပါသော ပြည့်တန်ဆာမသည် ဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ တန်ခိုးအရာတွင် ဧတဒဂ် ရာထူးရရှိသော ဥပ္ပလ၀ဏ္ဏာ ဘိက္ခုနီမ ဖြစ်လာသည် ( သံသရာ ကြောက်စရာ ကောင်းပုံက ပြည့်တန်ဆာမတောင် ဖြစ်ခဲ့ဖူး သတဲ့ )
အရှင်ပုဏ္ဏ ရဟန္တာ မထေရ်သည် ထိုအခါက တံခါးမှုး၊
အရှင်မဟာကစ္စည်းမထေရ်သည် ထိုအခါက မြေတိုင်းအမတ်ကြီး၊
အရှင်မောဂ္ဂလာန်မထေရ်သည် ထိုအခါက အကြီးဆုံး ကုန်သည်ကြီး၊
အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ထိုအခါက သူဋ္ဌေးကြီး၊
အရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် ထိုအခါက ရထားထိန်း၊
အရှင်မဟာကဿပမထေရ်ကြီးသည် ထိုအခါက ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏားကြီး၊
အရှင်နန္ဒ မထေရ်သည် ထိုအခါက အိမ်ရှေ့မင်းသား၊
ယသော်ဓရာ သည် ထိုအခါက မိဖုရားခေါင်ကြီး၊
မယ်တော်မာယာ တဖြစ်လဲ သန္တုဿိတနတ်သားသည် ထိုအခါက ကုရုမင်းကြီး၏ မယ်တော်၊
ဂေါတမဘုရားရှင်သည် ထိုအခါက ကုရုမင်းကြီး အဖြစ်ဖြင့် သံသရာကျင်လည်ခဲ့ဖူးသည်။
ဤဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်တွေးမိသည်ကား ကုရုဓမ္မအကြောင်းဖော်ပြသော ဤဇာတ်တော်ကို ဘုရားရှင်သည် တော်သလင်း လပြည့်နေ့ တွင် ဟောခဲ့သောကြောင့် ယင်းနေ့ကို ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့လေသလား၊ နောက်တချက်အ နေဖြင့် ကာလိင်္ဂတိုင်းသားတို့အား ငါးပါးသီလ ကို ရွှေပေလွှာတွင် ရေးကူးစေကာ တော်သလင်းလပြည့်နေ့တွင် ပေးခဲ့လေ သောကြောင့် ကုရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ ဂရုဓမ္မအခါတော် နေ့ဟု သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုခဲ့လေသလား တွေးတောစရာပင်။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ဇာတ်တော်ထဲတွင် ဘုရားအလောင်း ကုရုမင်းကြီးသည် လပြည့်နေ့ ( ၁၅ ) ရက်ခေါ် ပန္နရသီ ဥပုသ်နေ့၌ ကိုယ်တော်တိုင် အလှူပေးရန် ပရိသတ်အကြား လာရောက်စဉ် ကာလိင်္ဂတိုင်းမှ ပုဏ္ဏားများအား ငါးပါးသီလ ကို ရွှေပေလွှာ မှာ ရေးကူးစေသည် ဟု ဆိုသောကြောင့် ဒုတိယအချက်ကို ထောက်သောအားဖြင့် ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ တာ သေချာသလောက် ရှိပေသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် တော်သလင်းလပြည့် ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့သည် ကိုယ်ကျင့်သီလ moralityများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ characters ပိုင်း ဆိုင်ရာများ ပျက်ရွင်းနေသော ယနေ့ခေတ် အခါကြီးတွင် တော်သလင်း လပြည့်နေ့ ကို ရောက်တိုင်း လူသားများအား အကျင့်သီလများ အားကောင်းစေဖို့၊ ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ စတာတွေကို တလေးတစား စောင့်ထိန်း ကြစေဖို့ ဘုရား အလောင်း ကုရုမင်းကြီးက သတိပေးနေသည် သတိပေးခဲ့သည် ဟုပင် ဆိုချင်ပါတော့သည်။
စာညွှန်း။ ။ ကုရုဓမ္မဇာတက၊ ဒုကနိပါတ်၊
Posted by Alex Aung at 1:48 PM No comments:
Multi-Level Marketing သမားတွေ စည်းရုံးသလို လူတိုင်းချမ်းသာနိုင်မှာလား
Multi-Level Marketing သမားတွေ
Network Marketing ကုမ္ပဏီတခုက လူတိုင်းချမ်းသာနိုင်သည့် နည်းလမ်း ၎င်းတို့တွင်ရှိသည်ဟုပြောလာလျှင် ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ တိုင်းပြည်ချမ်းသာမည်၊ မချမ်းသာမည်ထက် ထိုတိုင်းပြည်နေ လူတိုင်းချမ်းသာရမည်ဟု ဆိုပါသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Network Marketing ကုမ္ပဏီများက လူအများကို ပစ်မှတ်ထားကာအင်တိုက်အားတိုက်လုပ် ဆောင်လာနေသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ လမ်းဘေးဈေးသည်မှအစ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာစသည့် ပညာတတ်
အသိုင်းအ၀ိုင်းအထိ 'ဒါရိုက်တာ'ဟူသော ရာထူးအိပ်မက်၊ တလသိန်း ၃၀ ရရှိ မည်ဆိုသည့် အိပ်မက်ကို မက်နေကြသည်။
Network Marketing လုပ်ငန်းကို ယခင်ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်းစက်များကြောင့် စက်ဆုပ်ရွံရှာသူ အများအပြား ရှိနေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် Network Marketing အား စိတ်ဝင်စား၍ လုပ်ကိုင်နေသူ ပေါင်းသိန်းနှင့်ချီ၍ ရှိနေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် MCC ခန်းမတွင် Unicity ထုတ် ကုန်များနှင့်
ပတ်သက်၍ Network Marketing ပွဲတပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းပွဲအား သာမန်ကာလျှံကာထင်ထားခဲ့သော်လည်း လူဦးရေ ၆၀၀၀ ခန့် တက်ရောက် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ တက်ရောက်လိုသူတိုင်း အခမဲ့ တက်ရောက်
ခွင့်ရရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ တဦးလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် လက်မှတ်တစောင်ဝယ်ယူမှ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည်။ လူဦးရေ ၆၀၀၀ ခန့် MCC ခန်းမအပေါ် ထပ်၊ အောက်ထပ်အပြည့် တက်ရောက်လာသည့်သူများအား မည်သည့်အရာများက ဆွဲဆောင်ထားပါသနည်း။
ပွဲစတင်သည်နှင့် Unicity ထုတ်ကုန်နှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရသူများသည် လောကတွင် ကံအကောင်းဆုံးလူများဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲ၍ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရသူ
များသည်လည်း မဟာအခွင့်အရေးရရှိသူများကဲ့သို့ တင်စားခဲ့ကြ သည်။
လူ့ဘ၀တွင် ငွေကြေး၊ အချိန်၊ ကျန်းမာရေးပြည့်စုံမှဘ၀သည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း
သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းအချက်အား Unicity ထုတ်ကုန်များဖြင့် Network Marketing လုပ်သည့်သူတိုင်းရရှိနိုင်မည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
တင်ဆက်မှုပုံစံများတွင် Unicity ထုတ်ကုန်များ၏ အားသာချက်များ၊ သုတေသနပြုလုပ်ထားချက်များ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက်
ဆိုးကျိုးမရှိဆိုသည်များအား ဆရာဝန်တဦးက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ကုန်များသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထောက်ခံချက်
များဖြင့်ဟုပြောပြပြီး ဆေး သိပ္ပံလောက၏ဘုရင်ဟု တင်စားသည့် Rexall ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို ရေဖြင့်ဖျော်သောက်လျှင်ပင် ကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်းပြောပြီး ဆရာဝန်လောကတွင် ထင်ရှားသည်ဟုလည်းဆို၏။
လူထု၏ကျန်းမာရေးထက် အသင်းဝင်သူများ ဘယ်လိုကြီးပွားချမ်းသာမည်၊ ဘယ်နိုင်ငံများသို့ သွားရမည်ဟုသာ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကို သိရသည်။ သည်အတိုင်းဆိုလျှင် ဆေးဝါးအနေဖြင့် ဆေးရုံများ၊ ဆရာဝန်များမလိုတော့ဟု ယူဆရမလို ဖြစ်နေသည်။
ထို့နောက် Network Marketing ၏ Multi Level Marketing (MLM) ဈေးကွက်ဆင့်ပွားလုပ်ဆောင်ခဲ့သူများ၏ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရချိန်မှ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များ ခံစားရပုံများကို အများအားကျလောက်အောင် တင် ဆက်ပြသည်။
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ အမျိုးသမီးတဦးသည် ယင်းဆေးကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကို ဈေးကွက်ဆင့်ပွားစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းအား အယုံအကြည်မရှိဘဲ သူမ၏အမျိုးသားမှ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင် ရန်ပြောကြားကြောင်း၊ သို့သော်လည်း စိတ်မ၀င်စားဘဲနေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ စိတ်မ၀င်စားဘဲနေခဲ့ ရာမှ ၎င်း၏အမျိုးသားက မန်ဘာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပြင်သစ်ခရီးစဉ်ကို တကိုယ်တည်းသွား မည်ဟုဆိုသဖြင့် ခွင့်မပြုလိုခြင်းကြောင့် ၎င်းပါလိုက်ပါနိုင်ရန် လွိုင်ကော်သို့သွားရောက်ကာ ဈေးကွက်စတင်ခဲ့ သည်ဟုဆိုသည်။
သူ၏ဘ၀အိပ်မက်တွင်လည်း မိသားစုနှင့်အတူတကွ ရှိချိန်များစွာလိုချင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူ၏ဖခင်သည် မော်ချီးဘက်တွင် မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပြီး ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး ၀ါသနာပါသည့်အတွက် ဧက ၁၀၀ ၀ယ်ယူကာ နဂါးမောက်စိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးထားသည့်လုပ်ငန်းလည်းရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
သူ၏ မိခင် သည် သူတို့မြို့နယ်၏ မသိသူမရှိသည့် ဆီစက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း လွိုင်ကော်မြို့တွင် ဈေးဆိုင်တခုကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။
ဘ၀အောင်မြင်မှုများစွာရှိနေသော်လည်း အချိန်နည်းပါးခြင်းကြောင့် မိသားစုချင်း မျက်နှာစုံညီ ထမင်းစားရန်ပင် အခက်အခဲရှိပြီ့းUnicity ၏ Happy Life Project ကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး သူ၏ အမျိုးသားနှင့် ပြင်သစ်သို့ အခမဲ့ခရီးသွားခွင့်ရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ယခု MCC သို့ တက်ရောက်လာသည့် လူများ အနေဖြင့် လာမည့်လေးလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာခရီးစဉ်အတွက် အိပ်မက်မက်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုပါ ပြော ကြားခဲ့သည်။
ယင်းအစီအစဉ်တွင် လူသားများသည် သက်တမ်းတလျှောက် အနှစ် ၄၀ ခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော်လည်း ပျော်ရွှင်သည့်ဘ၀ကိုမရရှိ၊ မခံစားခဲ့ရဘဲ အချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားသည်ဟုဆိုသည်။ Unicity ၏ Happy Life Project သည် သုံးလမှ ခြောက်လအတွင်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လစဉ်ဝင်ငွေ သိန်း ၃၀ ခန့်ရရှိပြီး သုံးနှစ်ပြည့်သည့်အချိန်တွင် ပင်စင်ရရှိ ကာ အလုပ်လုပ်ရန် မလိုတော့ဟု ဆိုသည်။
ထို Happy Life Project ကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သူများ၊ ခံစား စံစားနေရသည့်သူများ၊ နိုင်ငံတကာတွင် အောင် မြင်နေသူများ၏ အတွေ့အကြုံများအား တင်ဆက်ပြသခဲ့ပြီး ဘ၀တွင် ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ကွန်ဒိုများကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူခွင့်၊ စိတ်ကြိုက်မော်တော်ယာဉ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့် ၊ နိုင်ငံအများအပြားသို့ အခမဲ့လည်ပတ် ခွင့်ရခြင်းသည် လူသားဘ၀တွင် မကောင်းပေဘူးလောဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ တက်ရောက်သူတိုင်းမှ ကောင်းမွန် သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ဖြေကြားခဲ့ကြလေသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လူတဦးလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ ဖြင့် MCC ခန်းမကြီးတခု လုံး ရုံပြည့်ရုံလျှံတက်ရောက်လာသည်အထိ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းမှာ ချီးကျူးစရာပေ။
ဟောပြောပွဲ တင်ဆက်ပွဲအပြီးတွင် မိမိမန်ဘာအဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းစုစည်းကာ ယနေ့တက်ရောက်ရသည့် အတွေ့အကြုံများအားပြောပြစေခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူတိုင်းနီးပါးမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် မနက်ဖြန်တွင် နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်သွားရမည့် ဒါရိုက်တာတဦးအဖြစ် အထင်ရောက်သွားကြသည်
MCC တွင် ကျင်းပသည့် ကျပ် ၅၀၀၀ ပွဲစဉ်တက်ရုံဖြင့် လူ့ဘ၀ကြီးတွင် မသေဆုံးသင့်သေးကြောင်းနှင့် ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရိ Dolphin စားသောက်ဆိုင်တွင် ပြုလုပ်မည့် သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးမှသာ လူ့ဘ၀သည် သေဆုံးသင့်သည်ဟုဆိုပြန်၏။
ယင်းသင်တန်းတက်ရောက်ရန် လက်မှတ် တစောင် ကျပ် ၁၅၀၀၀ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရောင်းချသောကြောင့် အမြန်ဝယ်ယူ သင့်သည်ဟု အကြံပြုပြန်၏။ ယင်းအတွက် Dolphin စားသောက်ဆိုင်တွင် တက်ရောက်ခွင့်လက်မှတ်တစောင် ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး လေ့လာဦးမည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။
ပွဲတက်ပြီး သူများ၏အပြန် မျက်ဝန်းများ၌ မကြာမီ သူဌေးဖြစ်ရတော့မည့် အရိပ်အယောင်များအား မြင်တွေ့နေရပြီး အားလုံးသည် တက်ကြွနေကြသည်။ ထိုင်း နိုင်ငံမှ လာရောက်ရှင်းပြသည်များကို စကားပြန်များမှတဆင့် အားတက်သရော နားထောင်နေသော လူအုပ်စု များလည်း ဟိုတစု ဒီတစု တွေ့မြင်နေခဲ့ရသည်။
MLM ခေါ် ဈေးကွက်ဆင့်ပွားစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခင်ကလည်းရှိခဲ့ဖူးရာ အဆုံးသတ်၌ အလိမ်အညာ များဖြင့် အချည်းနှီးသာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်များကို သတိရမိ၏။ ဆင့်ပွားဈေးကွက်၏သဘောအရ လူတဦးအဖွဲ့ဝင်ပြီး ပါက မိမိလက်အောက်တွင် လူငါးဦး ထပ်မံရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ၎င်းငါးဦးမှ လူငါးဦးစီ ထပ်မံရှာဖွေပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်ဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီမှ စားသုံးသူအထိ အဆင့်များဖြတ်သန်းရသည်။
နောက်ဆုံး စားသုံး သူများအတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ဈေးနှုန်းထက် များစွာမြင့်မားသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူစားသုံးရခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း အထက်အဆင့်ဆင့်မှ အောက်ခြေသို့ အမြတ်များစွာယူသည့် လုပ်ငန်း စဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ တင်ဆက်မှုများတွင်လည်း အကျိုးအမြတ်များရသည်ကို မစားရ၀,ခမန်းကြားနေရ၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တရားဝင်သည်ဟု ပြောကြားပြီး MLM ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် မည်သည့်ဌာနမှပေးခဲ့သည် ဆိုခြင်းကို တလုံးတပါဒမှ ထည့်သွင်းပြောကြား
ထားခြင်းမရှိပေ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၄၅ နိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းဟု ပြောကြားထားပြီး ယင်း ၄၅ နိုင်ငံအနက် မြန်မာပြည်၏
ရောင်းအားသည် အဆင့်-၁ ဖြစ်သည်ဟု ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် Dolphin စားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပသောသင်တန်းသည် သင်တန်းသား အဆင့် သုံးဆင့်ခွဲထားပြီး ပထမဦးဆုံးတက်ရောက်လာသူများအား Class-1 အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ယင်း Class-1 တက်ရောက်လာသူများအား မိမိတို့သည် ငါးနှစ်သား ကလေးငယ်တဦးအဖြစ် ခံယူထားရန်လည်း ညွှန်ကြား ထားသည်။
သင်တန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် How to Get Start ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အချက် ၈ ချက်အား သင်ပြပေး သည်။
သင်ကြားသည့် ပုံစံမှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့သည့်သူများ၏ အတွေ့အကြုံများအား ယမန်နေ့ကကဲ့သို့ပင် အချက် ၈ ချက်ဖြင့် တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သင်တန်း Class သုံးခုတွင် လူဦးရေစုစုပေါင်း ၇၀၀၀ ခန့် တက်ရောက် ကြသည်။ လူတဦးလျှင် ကျပ် ၁၅၀၀၀ ပေးရပြီး အခန်းထဲတွင် ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် Marketing လုပ်နိုင်သည့် အရည်အချင်းသည်လည်း မသေးဟု ခံစားမိ၏။
သင်တန်းတွင် အချက် ၈ ချက်ကို နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထိ သင်ကြားမည်ဖြစ်ရာ ပရိသတ်အား ငြီးငွေ့မှုမရှိစေရန် Marketing လုပ်နိုင်သည်က အံ့သြဖွယ်ပင် ဖြစ်၏။
စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ၁၀၀ PV အတွက် ကျပ် တသိန်းကျော်ဖိုး၊ ၂၀၀ PV အတွက် ကျပ်သုံးသိန်း ကျော်ဖိုး၊ ၅၀၀ PV အတွက် ကျပ်ရှစ်သိန်းကျော်ဖိုး စာရင်းဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းအချက် ၈ ချက် ပါ အိပ်မက်နှင့် ပန်းတိုင်ရရှိခြင်းက လူများနှင့် တိုင်ပင်အလုပ်လုပ် ခြင်းများစသည်တို့ ပါဝင်သည်။
အောင်မြင်ပြီးသား လူများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ယှဉ်ကာ တင်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများပါ ၀င်ရောက်သင်တန်းပို့ချသည်။
ယင်းအချက်များအတွက် ငါးနှစ်သား၏အတွေးအခေါ် အယူအဆဖြင့် လက်ခံရန် လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့သည်။ အောင်မြင်ခဲ့သူများ၏ရလဒ်များအား လိုချင်ပါက သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် လမ်းစဉ် အတိုင်း အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ညွှန်ပြပြီး ယခုသင်တန်းတက်ပြီးပါက Class-2 သို့ တက်ရောက်ရန် ဖြစ်ပြီး မတက်ရောက်ဖြစ်လျှင် ဒီတသက် မသေထိုက်သေးကြောင်းနှင့် ယင်းထက်ပိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် Camp ကပို၍ တက်ထိုက်ပြီး ယင်း Camp မတက်ရောက်လျှင်လည်း ဒီဘ၀၌ မသေထိုက်သေးဟု ဆိုရိုးစကားပင်ရှိသည်ဟု ဆိုပြန်သည်။
ထိုအတွေ့အကြုံများ ပြောကြားချိန်တွင် ပုဂံမှလာသူများ၊ မန္တလေးမှ၊ သရက်မှ စသဖြင့် နိုင်ငံ၏ နေရာအနှံ့ အပြားမှလာသူများအား တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းအထဲမှ ကိုရီးယားသို့သွားရန် စီစဉ်ထားသူများလည်း ခရီး စဉ်အား ဖျက်လိုက်သည်။
လက်ရှိရန်ကုန်တွင် သိန်းဆယ်ချီဝင်နေသော ၀န်ထမ်းများလည်း အလုပ်ထွက်တော့ မည်။ လမ်းဘေးဈေးရောင်း သူများလည်း ဈေးရောင်းခြင်းထက် ယခုအလုပ်အား ဇောက်ချလုပ်တော့မည် စသဖြင့် လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ထက် ဘ၀အချိုးအကွေ့အဖြစ် Network Marketing လုပ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
အားလုံးသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဒါရိုက်တာဟု အထင်ရောက်ရှိသွားကြပြီး ၎င်းထက်အဆင့် မြင့်သည့် ရာထူးများအား တဆင့်ချင်းတက်ရောက်နိုင်မည်ဟု အထင်ရှိနေကြလေသည်။
ကျွန်တော်သည် ဒေးကာနက်ဂျီ၏စာအုပ် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု ဘာသာပြန်သွားသည့် လူပေါ်လူ ဇော်လုပ်နည်း (၀ါ) မိတ္တဗလဋီကာကိုသာ သွားသတိရမိသည်။
Network Marketing လုပ်ငန်းသည် ၎င်းတို့ပြောသကဲ့သို့ လူသားများ၏ဘ၀အား အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲ ခွင့်ရမည်လော၊ ၎င်းလုပ်ငန်းကြောင့် တိုင်းပြည်၏ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့်ရလဒ် အမှန်တကယ်ရမည် လော၊ နိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်ငံထက် အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံက အဘယ့်ကြောင့် ရောင်းအား နံပါတ်-၁ ဖြစ်ရသလဲ၊ MLM သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိ၊ မရှိ မည်သူ့ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သလဲစသည့် မေးခွန်းများအပြင် ယခင်က သာဓကပေါင်းများစွာအား ဆင်ခြင်မိပြီး MLM ဈေးကွက်အတွက် စိုးရိမ်မှုများ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ မကြာမီ ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် (ဆာကူရာတာဝါအတွင်း) ကျပ်သန်းပေါင်းများစွာ လိမ်လည်သွား သည်ကိုပင် အသာတကြည်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ကုန်များ၏ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းအား မဝေဖန်လိုသော်လည်း MLM ၏ လူတိုင်းချမ်းသာခွင့်ရှိနိုင်သည်ဆိုသည့် ဆွဲဆောင်မှုအတွက်
မိမိအား ပွဲအတွင်းသို့ ခေါ်ယူခဲ့သူအား စကားတခွန်းသာ ပြောခဲ့မိသည်။ ''ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ မစွန့် လွှတ်ပါနဲ့၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း မစည်းရုံးပါနှင့်''ဟုသာ ပြောခဲ့မိသည်။ ကောင်းလွန်းလျှင် အမှန်မဖြစ်နိုင်-
‘Too good to be true’ ဆိုသော အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်း သတိရမိသည်။
News Watch စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလ News Watch (စောင့်ကြည့်)သတင်းဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးအားပြန်လည်ဖော်ပြသည်။
Posted by Alex Aung at 2:02 PM No comments:
Labels: Opinion, စီးပွားရေး
Posted by Alex Aung at 7:48 AM No comments: